Ho anao izay mampiasa smartphone "android", manasa anao hampiasa ireto applis maimaimpoana ireto izay tena hanampy anao be dia be tokoa amin'ny fitom Efa tsy hitako ao amin'ny play store intsony izy io efa ela dia ela izay, noho izany tsy misy mise à jour fa avy hatrany dia iny mandrakizay. Ezahako ihany ny hizara azy eto 2- Manaraka azy eo dia ny "Baiboly sy Fihirana Protestanta", izay ahitantsika ny baiboly protestanta amin'ny fiteny malagasy, fihirana ffpm, fihirana fanampiny, fihirana fifohazana sy vavaka samihafa. Ity kosa dia amin'ny teny anglisy ny "interface" ary azo avadika teny frantsay ihany koa izy.
Hianatra roa aman-telo amin'izany isika. Finaritra :- Fiarahabana io. Jesoa Kristy koa nampiasa an'io rehefa nitsangana tamin'ny maty Izy ka niarahaba an'i Maria. Fiarahabana misy fihetseham-po io, sady misy filaliana! Mitovy hevitra amin'ny hoe "fiadanana", satria ny teny hebreo hoe "shalom" no nadika hoe "finaritra" sady nadika hoe koa: "fiadanana" ao amin'ny Baiboly Malagasy!
Noho izy io teny fiarahaban'ny olona avy nandresy, no azo andikana azy amin'ny fiarahabana malagasy rehetra: oh. Tonga tsy miarahaba, naman'ny sosotra; lasa tsy manao veloma, naman'ny tezitra! Fiadanana :- Sady mety hatao fiarahabana, nefa ampiasaina matetika amin'ny fanaovam-beloma io. Rehefa handao ny mpianatra ny Tompo fa ho any an-danitra no nampiasa matetika io "fiadanana" io. Isika ato amin'ny Tranovato fptaf no faly mampiasa io teny io aorian'ny Fandraisana ho firariana soa sy fanaovana veloma mandra-pihaona indray!
Fahasoavana :-Fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsy mendrika ny "Fahasoavana". Izany no maha-famantarana hita maso momba ny Fahasoavan'Andriamanitra ny Batisa sy ny Fanasan'ny Tompo!
Fa fanomezana ho an'ny olona mendrika kosa ny "valisoa". Misy ambaratonga dimy àry ny fahasoavana atolotry ny Tompo ho anao, ka manao lanja miakatra hatrany:- a -Mahita fitia eo imason'Andriamanitra ianao Jao.
Samia mandini-tena, hatraiza ny fahasoavana efa voarainao a sa b sa d sa efa lasa ambony kokoa? Jaona Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika fahasoavana anampy fahasoavana! Vavaka :-Firariana soa koa ny vavaka amin'ny lafiny ilany. Samia mifampivavaka isika rehetra, mangataka ny soa ho an'ny namana sy izay heverinao ho ny fahavalo aza. Sady azo amafisina amin'ny teny hoe: "Amena!